ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ပွဲတော် (ရန်ကုန်)ကို ငါးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပမည်၊ ရိုးရာမပျက် န - Yangon Media Group
ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ပွဲတော် (ရန်ကုန်)ကို ငါးရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပမည်၊ ရိုးရာမပျက် န
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် (၁၅)ကြိမ်မြောက် ရခိုင်ရိုးရာယဉ် ကျေးမှုသင်္ကြန်ပွဲတော်(ရန်ကုန်)ကို ဧပြီ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ ၅ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး နံ့သာသွေးပွဲနှင့် ဘုရားရေ သပ္ပာယ်ပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ် ဓမ္မာ ရုံတွင်လည်းကောင်း၊ သင်္ကြန်ရေ လောင်းပွဲကို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်းတွင်လည်း ကောင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန် ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဦးဇော်အေးမောင် ဦး ဆောင်ကြီးမှူးပြီး ရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အ စည်းများစုပေါင်း၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ် ပြီး စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ဧပြီ ၇ ရက်က ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီး ရှိ ရခိုင်ဓမ္မာရုံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
”သင်္ကြန်ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင် ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ပတ် သက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန် တော်တို့ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်ကိုလည်း တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ် ဝမ်းမကွဲဘူး။ စည်းလုံးညီညွတ် တယ်။ အားပေးတယ်ဆိုတာလေး ကို ပြတဲ့အနေနဲ့ လာပြီးတော့အား ပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန် ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်နဲ့ ရခိုင်လူ မှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ကျင်းပတာဖြစ် ပါတယ်”ဟု (၁၅) ကြိမ်မြောက် ရ ခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကြန်ပွဲတော် (ရန်ကုန်)ကျင်းပရေးဗဟို ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမောင်က ပြောသည်။ ရခိုင်ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင် ကျော် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်း ကရှိခဲ့သော ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နံ့သာသွေးပွဲထည့်သွင်းကျင်းပ သလို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော အ ဝတ်အစားများကိုသာ ဝတ်ဆင်ပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဆင်နွှဲရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အခြားတိုင်း ရင်းသားပေါင်းစုံလည်း ရခိုင်သင်္ကြန် ပွဲတော်ကို လာရောက်ဆင်နွှဲလို့ရ တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ထူးခြားချက် ဖြစ်တဲ့ နံ့သာသွေးပွဲတော်အကြောင်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လူသားအချင်း ချင်း ရေမပက်ခင်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံအရ ဘုရား ဆင်းတုတော်တွေ၊ ကျောင်းဆောင် တွေ၊ စေတီတွေကို ရေသပ္ပာယ်ရ မယ်။ ပြီးတော့မှ လူတွေကို ရေပက် ခံရမယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဓလေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း အခုမှ ကျင်းပတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော် ကတည်းက သွန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ မဟာ မုနိဘုရားကို နံ့သာရေနဲ့သွန်းလောင်း တယ်ဆိုတာကနေ စခဲ့တဲ့ဓလေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ ချီရှိပါတယ်။ ဒီလိုရိုးရာဓလေ့တွေ မပျောက်ကွယ်အောင် လူငယ်တွေ ကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ပွဲတော်ကို သရုပ်ပျက်ပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ မတင့်တယ်တဲ့ အ ဝတ်အစားတွေ ဝတ်မလာဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ်”ဟု ကျင်းပရေးဗဟို ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ နံ့သာသွေးပွဲ တော်နှင့် ဘုရားရေသပ္ပာယ်ပွဲတော် ကျင်းပရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နုမြဇံကပြောသည်။ သရုပ်ပျက်အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်လာပါက သင်္ကြန်ရေလောင်း မဏ္ဍပ်အတွင်း ဝင်ခွင့်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပုဆိုး၊ ထဘီဝတ် ဆင်သူများသာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုကော်မတီမှ သိရသည်။
‘ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာဆိုတဲ့ သီချင်းအတိုလေးကို နောက်ထပ် version တစ်ခုနဲ့ ဒီရက်ပိုင်?
စကုမြို့ အာဇာနည်ရင်ပြင်တွင် ထားရှိမည့် အာဇာနည် ကိုးဦး ရုပ်တုများထဲမှ ရဲဘော် ကိုထွေးရုပ်တ??